Paul's 2nd Letter to Timothy – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / စီရင်သောဩဝါဒစာ / Paul's 2nd Letter to Timothy
2 တိမောသေကို 1
1:1 ရှင်ပေါလု, an Apostle of Jesus Christ through the will of God, in accord with the promise of the life which is in Christ Jesus,
1:2 to Timothy, most beloved son. Grace, mercy, မိဿဟာယ, from God the Father and from Christ Jesus our Lord.
1:3 I give thanks to God, whom I serve, as my forefathers did, withapure conscience. For without ceasing I hold the remembrance of you in my prayers, နေ့ညဉ့်,
1:5 calling to mind the same faith, which is in you unfeigned, which also first dwelt in your grandmother, Lois, and in your mother, Eunice, လည်း, I am certain, in you.
1:6 ဒီအတွက်ကြောင့်, ငါသည်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ပြန်လည်ရှင်သန်ရန်သင့်အားသတိပေး, ငါ့လက်၏စည်းကြပ်အားဖြင့်သင်တို့အတွက်အရာဖြစ်ပါသည်.
1:7 ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကွောကျရှံ့ခွငျး၏ဝိညာဉျကိုမပေးတော်မူပြီ, ဒါပေမယ့်သီလ၏, နှင့်ချစ်ခြင်း၏, နှင့် Self-ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း၏.
1:8 ဆိုတော့, ငါတို့သခင်၏သက်သေခံတော်မူချက်ကြောင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိကြ, မသည်ငါ့၏, သူ့အကဉျြး. အဲဒီအစား, ဘုရားသခင်၏သီလနှင့်အညီဧဝံဂေလိတရားကိုအတူပူးပေါင်း,
1:12 ဒီအတွက်ကြောင့်, I also suffer these things. But I am not confounded. For I know in whom I have believed, and I am certain that he has the power to preserve what was entrusted to me, unto that day.
1:13 သငျသညျခရစျတျောသညျယရှေုကိုသောသောယုံကြည်ခြင်းတရားနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ငါ့ထံမှကြားရကြပြီအသံစကားလုံးများ၏ကြင်နာဖို့ Hold.
1:14 သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်အားဖြင့်သင်တို့ရှိရာသို့အပ်နှင်းကောင်းကျိုးကိုစောင့်ရှောက်, ကျွန်တော်တို့ကိုအတွင်းနေထိုင်သောအသက်.
1:17 အဲဒီအစား, when he had arrived in Rome, he anxiously sought me and found me.
2 တိမောသေကို 2
2:1 ထိုအသင်တို့အဘို့အအဖြစ်, ငါ၏သား, be strengthened by the grace which is in Christ Jesus,
2:5 ထိုအခါ, လွန်း, whoever strives inacompetition is not crowned, unless he has competed lawfully.
2:10 I endure all things for this reason: for the sake of the elect, သူတို့နိုင်အောင်, လွန်း, may obtain the salvation which is in Christ Jesus, with heavenly glory.
2:11 ဒါဟာသစ္စာရှိသောသူသည်သစ္စာစကားဖြစ်၏: that if we have died with him, we will also live with him.
2:20 ဒါပေမယ့်, inalarge house, there are not only vessels of gold and of silver, but also those of wood and of clay; and certainly some are held in honor, but others in dishonor.
2:21 If anyone, ထို့နောက်, will have cleansed himself from these things, he shall beavessel held in honor, sanctified and useful to the Lord, prepared for every good work.
2:22 သို့ဖြစ်., flee from the desires of your youth, သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, pursue justice, ယုံကြည်ခြင်းအား, မျှော်လင့်ချက်, မေတ္တာ, နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး, along with those who call upon the Lord fromapure heart.
2 တိမောသေကို 3
3:1 ဤရွေ့ကား, သိကြ: that in the last days perilous times will press near.
3:5 even having the appearance of piety while rejecting its virtue. ဆိုတော့, avoid them.
3:10 But you have fully comprehended my doctrine, instruction, purpose, ယုံကြည်ခြင်းအား, longsuffering, love, သည်းခံခြင်း,
3:14 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, သင်လေ့လာသင်ယူခဲ့ကြရသောသငျတို့အားအပ်နှင်းခဲ့ပြီးသောသူတို့အားအမှုအရာ၌တည်နေသင့်တယ်. သူတို့ကိုသင်လေ့လာသင်ယူကြပြီဘယ်သူကိုမှသင်သိဘို့.
3:15 နှင့်, သင့်ရဲ့နို့စို့အရွယ်ကနေ, သင်မြင့်မြတ်သောမျြးစောငျကိုသိ, ကယျတငျတျောမူခွငျးအပျေါအသငျသညျကိုသွန်သင်နိုင်ခဲ့သော, ယေရှုခရစ်၌ရှိသောအရာယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်.
3:16 အားလုံးကျမ်းစာ၌, ဘုရားသခငျတျသှငျးခံခဲ့ပြီးမှ, ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအဘို့အအသုံးဝင်သည်, အပြစ်တင်ခြင်းကိုများအတွက်, ဆုံးမခြင်းအဘို့, နှင့်တရားမျှတမှုအတွက်ညွှန်ကြားချက်အဘို့,
3:17 ဘုရားသခငျ၏လူစုံလင်ခြင်းရှိစေခြင်းငှါဒါ, တိုင်းကောင်းသောအလုပ်အတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ပြီးမှ.
2 တိမောသေကို 4
4:1 ငါသည်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌သက်သေခံ, နှင့်မီကသညျယရှေုခရစျသ, အဘယ်သူသည်ပြန်လာနှင့်သူ၏နိုင်ငံကိုတဆင့်လူနေမှုနှင့်အသေစီရင်မည်:
4:2 သငျသညျအရေးတကြီးနှုတ်ကပတ်တော်တရားကိုဟောပြောသင့်ကြောင်း, ရာသီနှင့်ရာသီထဲက: ဆုံးမ, ရာတှငျ, ဆုံးမသော, အားလုံးသည်းခံခြင်းနှင့်အယူဝါဒနှင့်အတူ.
4:3 For there shall beatime when they will not endure sound doctrine, ဒါပေမဲ့မယ့်အစား, according to their own desires, they will gather to themselves teachers, with itching ears,
4:5 သို့သော်သင်တို့အဘို့အအဖြစ်, အမှန်တကယ်, နိုးနိုးကြားကြားဖြစ်, laboring in all things. Do the work of an Evangelist, fulfilling your ministry. Show self-restraint.
4:6 ငါပြီးသားကွာဝတ်ဆင်ထားကြောင်းငါအဘို့အ, နှင့်ငါ့ဖျက်သိမ်း၏အချိန်နီးကပ်ကိုတိုက်တွန်း.
4:7 ငါသည်ကောင်းသောတိုက်လှန်ခဲ့ကြ. ငါသင်တန်းပြီးစီးပါပြီ. ငါယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစောင့်မပါပြီ.
4:8 ကျန်ရှိသောကြောင့်, တရားမျှတမှုသရဖူငါ့အဘို့သိုထားလျက်ရှိသည်, တဦးတည်းသောသခင်ဘုရား, အဆိုပါဖွင့်တရားသူကြီး, ထိုကာလ၌အကြှနျုပျကိုဆပ်ပါလိမ့်မယ်, နှင့်မသာငါ့ထံသို့, ဒါပေမယ့်လည်းသူ့အိမ်ပြန်ရန်မျှော်လင့်သောသူတို့အဖို့. မကြာမီငါ့ထံသို့ပြန်လာနိုင်ဖို့အလျင်အမြန်.
4:10 Crescens ဂလာတိသွားပြီ; Dalmatia ဖို့တိတု.
4:11 တယောက်တည်းလုကာငါနှင့်အတူဖြစ်ပါသည်. မာကုကို ယူ. သင်နှင့်အတူခေါ်ခဲ့; သူသည်အဓမ်မအမှု၌အကြှနျုပျကိုမှအသုံးဝင်သည်.
4:13 သငျသညျပြန်သွားတဲ့အခါ, ငါတရောမှာ Carpus နှင့်အတူကျန်ခဲ့သောရိက္ခာသင်နှင့်အတူငါဆောင်ခဲ့မည်, နှင့်စာအုပ်များ, ဒါပေမယ့်အထူးသဖြင့်ဖြင့်သားရေစာ.
4:14 အလက်ဇန်းဒါးဒြုသည်ငါဆိုးသောပြတော်မူပြီ; ထာဝရဘုရားသည်မိမိကျင့်သောအကျင့်သည်နှင့်အညီသူ့ကိုပြန်ဆပ်လိမ့်မယ်.
4:15 တဖန်သင်တို့လည်းသူ့ကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်; သူပြင်းပြင်းထန်ထန်ငါတို့စကားကိုခုခံပြီ.
4:16 ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးကာကွယ်ရေးမှာ, ငါ့အားဖြင့်ရပ်လျက်အဘယ်သူမျှမ, ဒါပေမဲ့လူတိုင်းငါ့ကိုစွန့်ပစ်. ဒါကြောင့်သူတို့တဘက်၌ရေတွက်မရနိုင်ပါစေ!
4:17 သို့သော်လည်းသခင်ဘုရားသည်ငါနှင့်အတူရပ်ငါ့ကိုခိုင်ခံ့စေ၏, ငါ့ကိုအမှီဟောပြောခြင်းပြည့်စုံလိမ့်မည်ဟုနိုင်အောင်, ဒါအားလုံးတပါးအမျိုးသားတို့သည်နားထောငျတျောမယ်လို့. ထိုအခါငါခြင်္သေ့၏နှုတ်ကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့သည်.
4:18 သခင်ဘုရားသည်မကောင်းသောအမှုရှိသမျှထဲကငါ့ကိုလွတ်မြောက်ခဲ့ပါသည်, မိမိကောင်းကင်နိုင်ငံအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ပြီးမြောက်ပါလိမ့်မယ်. အထံတော်သို့ဘုန်းအသရေကိုအစဉ်အမြဲအစဉ်အမြဲဖြစ်. အာမင်.
4:22 May the Lord Jesus Christ be with your spirit. May grace be with you. အာမင်.